सन् २०१० जुलाई महिनाको एक मध्यान्ह । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको तिहाड जेल आसपास केही सय मानिस भेला भएका थिए । उपस्थितमध्ये पनि युवाहरूको बाहुल्य थियो । विशेषतः दिल्लीस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयका छात्रछात्रा, युवा पत्रकारहरू, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीहरू जम्मा भएका थिए ।
भीडको बीचमा एउटा होचो कदका अधवैंशे जोडजोडले भाषण गरिरहेका थिए । आङमा सामान्य फ्याङ्ले सर्ट र प्यान्ट, टाउकोमा ‘स्वराज’ अंकित भारतीय टोपी । मुहारमा आक्रोश, बोलीमा विद्रोह । आँखा राता राता अनि हेराइमा गम्भीरता ।
भाषणको हरेक बिसौनीमा गगनभेदी नारा लाग्थे– भारत माताकी, जय ! वन्दे मातरम् !
ती सामान्य मानिस थिए– आईआईटी खडकपुरका एक अब्बल पूर्व छात्र, पूर्व आईएएस अधिकारी, एसियाकै नोबेल पुरस्कार मानिने म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित अरविन्द केजरीवाल ।
दिल्ली प्रदेश सरकारमा भारतीय कांग्रेस पार्टी सत्तासीन थियो । मुख्यमन्त्री शिला दीक्षितले १५ वर्षदेखि प्रदेशको सत्ता सम्हाल्दै आएकी थिइन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेसकै शीर्ष नेतृत्व केही समयअघि भारतमा सम्पन्न कमनवेल्थ खेलको आयोजनाका क्रममा ७५ हजार करोड घोटाला गरेको अभियोग खेपिरहेकोे थियो ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयता सन् २०१४ सम्म आउँदा पटक–पटक गरी आधा शताब्दीभन्दा बढी समय कांग्रेस भारतको केन्द्रीय सत्तामा रह्यो । सन् २०१० को जुलाईमा भाषणका दौरान कांग्रेस सरकार संलग्न रहेको भनिएका अख्तियार दुरूपयोग भएका एक–एक विवरण केलाइरहेका थिए केजरीवाल ।
तत्कालिन मनमोहन सिंहको सरकार दूरसञ्चारको टुजी स्पेक्ट्रम वितरण, शहरीकरणका परियोजनाहरूका ठेक्कापट्टा, खानेपानी आपूर्ति, विद्युत वितरण आदि अनगिन्ती क्षेत्रमा अकल्पनीय वित्तीय अपचलन र अव्यवस्थाका कारण बदनाम बनिरहेको थियो । दिल्लीबासी मात्र होइन, समग्र भारतीय अव्यवस्थाबाट आजित बनिरहेका बेला केजरीवाल केही सय मानिसहरुका बीच आशा देखाइरहेका थिए ।
राजनीतिमा बाहुबली र सामाजिक–राजनीतिक अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूकै बोलवालाका कारण राजनीतिको सारभूत मूल्य र आदर्श नै क्षतविक्षत भएको थियो । सामान्य आर्थिक स्थिति भएका इमानदार राजनेताहरू राजनीतिबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था बन्न पुगेको थियो ।
राजनीतिमा एउटा वैकल्पिक धारको आवश्यकता सहरी भारतीयहरूले महसुस गर्न थालेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । यी र यस्तै कुशासनका विरूद्ध एउटा आन्दोलनले उचाइ लिँदै थियो– भ्रष्टाचार विराधी आन्दोलन । यो आन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य थियो, जन लोकपाल विधेयक सदनमा पेश गर्ने र त्यसलाई कानुन बनाउने ।
महाराष्ट्रको रालेगढबासी गान्धीवादी अन्ना हजारे त्यस आन्दोलनका प्रमुख पात्र थिए । उनी जन्तरमन्तरमा आमरण अनसन बसिरहेका थिए ।
केजरीवाल पनि त्यस भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा प्रखर अभियन्ता थिए । केजरीवालका साथै हजारेलाई साथ दिइरहेका थिए– पूर्व प्रहरी आयुक्त किरण वेदी, पत्रकार मनिष सिसोदिया, पत्रकार आशुतोष, कानुन व्यवसायी प्रशान्त भुषण, विश्लेषक डा. योगेन्द्र यादव आदि ।
म तिनताका अध्ययनको सिलसिलामा नयाँ दिल्लीमै थिएँ । मसँग थिए अल इण्डिया रेडियोको नेपाली सेवाका पत्रकार विष्णु शर्मा, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयकी विद्यावारिधिकी छात्रा तस्नीम खान, जनज्वार डटकमका संस्थापक पत्रकार अजय प्रकाश, पत्रकार प्रेमा नेगी, जनसत्ताका पत्रकार कुमार राजेश, जीन्युजका पत्रकार विश्वदीपक ।
वर्तमान भारत र त्यसले खेपिरहेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकृति र विसंगतिबारे प्रशस्त जानकार मेरा भारतीय मित्रहरूले मलाई फरक–फरक सन्दर्भमा केजरीवालको भाषणमा खुल्न नसकेका कैंयौं विषयबारे जिज्ञासा मेटाइदिँदै थिए ।
भाषणमा केजरीवाल भन्थे, ‘हामीलाई पूर्ण स्वराज चाहिएको छ, हामीलाई जनलोकपाल कानुन चाहिएको छ। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि उचित व्यवस्थापन चाहिएको छ । हाम्रा सन्ततिका लागि राम्रो शिक्षा चाहिएको छ, राम्रो सुरक्षा बन्दोबस्त चाहिएको छ । हामी जनता लुटिएको देख्न सक्दैनौं । भ्रष्टाचार जरैदेखि निर्मूल गर्नुछ हामीलाई । पुलिससँग हाम्रो कुनै दुस्मनी छैन।’
पुलिसको सन्दर्भ आएपछि दर्शकदिर्घाबाट नारा घन्किन्थ्यो, ‘ये अन्दर कि बात है, पुलिस हमारे साथ है !’
भारतीय राजनीतिक वृत्तमा बिरलै देख्न पाइने यस्ता दृष्यहरूले एकै पटक धेरै नयाँ प्रश्नहरू खडा गर्दै थिए । भारतको स्वतन्त्रता संग्रामका लागि खडा भएका राजनीतिक दलहरू वर्तमानमा मानवीय समस्या सम्बोधन गर्न असमर्थ बन्दै गएको स्पष्ट संकेत ती दृष्यले गरिरहेका थिए।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा दलहरूका वार्धक्यपनको बोझले किशोर हिन्दूस्तानीका नवीनतम राजनीतिक चेतनाको वेगलाई गतिहीन बनाइरहेको प्रतीत भइरहेको थियो ।
राजनीतिक दलहरू पनि तिनका उद्गमकालको उमेरसँगै वृद्ध बन्ने रहेछन् कि जस्तो लाग्छ । एउटा बूढो विशाल रूख भित्रभित्रै धोद्रिँदै गएर मक्किने अनि कालान्तरमा माटोमा विलिन हुने एउटा नियमित आकस्मिकता नै हो । तथापि यो स्थिति मानव समुदायको सामाजिक इकाइहरूमा पनि देखा पर्ने कुरा विस्मयकारी लाग्छ ।
भारतीय कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीका विचार र तिनले स्थापना गरेका राजनीतिक विचार र आदर्शहरू पनि समयसँगै विस्तारै असान्दर्भिक बन्दै जान थालेको देखिन्थ्यो ।
आन्तरिक रूपमा घात–अन्तर्घातका असीमित शृंखलाहरूले लामो समय सत्ताको चास्नी चाट्न पाएका दलहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुका निम्ति खुन–पसिना बगाइरहेका करोडौं गरिखाने आम भारतीयका समस्याको दीर्घकालिन समाधानमा लाग्नुभन्दा पट्यारलाग्दात अर्थहीन लामा राजनीतिक भाषणमा व्यस्त रहे ।
खासगरी कांग्रेसको खस्किँदै गएको सांगठनिक संरचना र खुइलिँदै गएको सामाजिक छविले अब पुराना सोच र राजनीतिक एजेण्डा बोकेका दलहरूलाई छिट्टै नवीन राजनीतिक चिन्तन र आस्थाले विस्थापित गरिदिने स्थिति आएको झल्को पाइन्थ्यो ।
पुराना रूखहरूले ढाकिएको एउटा जंगल फाँडेर युग सुहाउँदो नयाँ पर्यावरण स्थापना गर्न वृक्षरोपण गरेजस्तै पुराना दलको साखलाई खुल्याएर नयाँ दलको आविर्भाव हुनु जरूरी भइसकेको थियो ।
त्यसै पनि भारतीय राजनीति हुनेखाने र खास मान्छेहरूको एउटा टुकडीले नै कब्जा गरेको दशकौं भइसकेको थियो । मुलुकको राजनीतिकै आधारभूत चरित्रको कायापलट गर्न ढिलो भइसकेको थियो । राजनीति विशुद्ध जनता र राष्ट्रको सेवा हो, आर्थिक लाभको उद्योग होइन भन्ने जनतालाई आभास दिलाउन जरुरी भइसकेको थियो । जनताले पाउनुपर्ने नैसर्गिक सुविधालाई सुलभ बनाएर सरकार र राज्य जनताका नोकर हुन् भन्ने भावना पैदा गर्ने जिम्मेवारी पनि अन्ना हजारे र अरविन्द केजरीवालका चासोको विषय थिए ।
केही वर्षपछि केजरीवालको नेतृत्वमा आम आदमी पार्टी स्थापना भयो । त्यसलगत्तै दिल्ली प्रदेशमा विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीले २८, भाजपाले ३१, कांग्रेसले ३ र बाँकी अन्य दलले जित हासिल गरे ।
आम आदमी पार्टीले भाजपासँग मिलेर सरकार बनायो तर २०१५ मा निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचन गरायो । यो निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीले ७० सिटमध्ये ६७ स्थानमा विजय प्राप्त गर्न सफल भयो । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीले आफ्नो भागमा ६३ सिट पारेको छ ।
आम आदमी पार्टीको यो शृंखलावद्ध विजय नयाँ दल र नवीन राजनीतिक चिन्तन भारतको पछिल्लो पुस्ताले चाहेको ज्वलन्त दृष्टान्त हो । आम आदमी पार्टीले दिल्लीको सत्ता सम्हालेयता आफ्ना प्रदेशवासीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा, विद्युत लगायतका सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने भएको छ । दुर्वाेध्य भाषण र अतीतको कामचलाउ जनसेवाका कामको अतिरञ्जित व्याख्याबाट मतदाता रिझाउन नसकिने यथार्थको पटाक्षेप पनि भएको छ ।
हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो दलले ६३ सिट जितेपछि मुख्यमन्त्रीको नयाँ कार्यकालको शपथ लिनेक्रममा कार्य प्रगति सार्वजनिक गदर्दै केजरीवालले दिल्लीका मतदातालाई भने, ‘तपाईंहरूले नयाँ राजनीतिलाई जन्म दिनुभएको छ– कामको राजनीति, विद्यालयको राजनीति, सस्तो बिजुलीको राजनीति, पानीको राजनीति, महिला सुरक्षाको राजनीति र एक्काइसौं शताब्दीको राजनीति ।’
उनका यस्ता कुरा र कार्यपद्धतिले राजनीति र सत्ताबारे विद्यमान अवधारणाको आधारशीला नै भत्काउने देखिएको छ । त्यसको स्थान नयाँ र जनपक्षीय स्वयं सेवामुखी राजनीतिले लिँदैछ ।
एउटा सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार बनाउने या एउटा व्यवस्थाको साटो अर्को व्यवस्था ल्याउने कर्मकाण्डी परिवर्तन अब काम नलाग्ने भएको छ । साँच्चैको परिवर्तनका लागि राजनीतिको नयाँ कथ्य नै आवश्यक पर्ने तथ्य सावित भएको छ ।
कतिपयले त आम आदमी पार्टीको शृंखलाबद्ध जितलाई दक्षिण एसियामा विद्यमान भ्रष्ट राजनीतिको अवसान र नयाँ सामाजिक–राजनीतिक युगको सुरुवातको रुपमा विश्लेषण गरेका छन्।